Wax ka ogow qodobada lifaaqa ah ee ay golaha wakiillada Puntland ku dareen ansixinta miisaaniyadda – Kalfadhi
Wax ka ogow qodobada lifaaqa ah ee ay golaha wakiillada Puntland ku dareen ansixinta miisaaniyadda
Golaha wakiillada Puntland ayaa lifaaq ku daray miisaaniyadda dowladda ee ay maanta ansixiyeen, taas oo ahayd saggaal ah bilood ah isla markaasna dhannayd 54,000,450, (Konton iyo milyan iyo afar boqol iyo konton dollar).
Golaha ayaa u jeediyay xukuumadda in miisaaniyadda ay wakiillada hor keenayaan ay ka saxaan khaladaad sharci oo ku jira, kuwaas oo inta badan goluhu ay dood ka yeesheen sabtidii.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa akhriyay qodoba lifaaqa ah ee lagu daray ogolaanshaha golaha wakiillada ee miisaaniyadda, waxayna kala yihiin;
In wasaaradda maaliyaddu ay soo raaciyaan miisaaniyadda ay soo gudbinayaan lifaaqa hay’adaha dakhliga qaata, si loo ogaado waxay qaataan iyo siday u kharash gareeyaan.
In wasaaradda iyo guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiiladu wadaagaan hay’ad kasta oo qaadda dakhli aan sharci ahayn baarlamankuna aanu anisixin, maadama golaha wakiilladu ay iyaga keliya leeyihiin awoodda ah in ay xalaaleeyaan in canshuur la qaado.
In la soo gudbiyo hay’ad walba oo qaadda dakhli aan sharci ahayn.
In la mideeyo boqolayda (%) ay qaataan hay’adaha dakhli arruurintu, hadii hay’aduhu ku kala duwan yihiin duruufahana in ay la yimaadaan caddayn la aqbali karo isla markaasna loo soo gudbiyo guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee golaha.
In wasaaradda maaliyadda ay qoondada ciidanka waafajiso afarta ciidan ee ku qoran dastuurka isla markaasna uusan jirin ciidan aan dastuuri ahayn oo miisaaniyadda ku jiraa.
Ansixinta ka hor, wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa golaha ka codsatay in la siiyo wakhti ku filan oo ay ku soo diyaariyaan miisaaniyad macquul ah oo laga baaraan degay, maadama ay jireen dhaliilo badan oo wasiirka cusub sheegay in ay geeddaanaayeen miisaaniyadihii tan ka horeeyay.
Miisaaniyadda maanta goluhu ansixiyay ayaa ah tii sannadkii hore oo aysan xukuumadda cusubi waxba ka bedelin, iyagoo golaha u sheegay duruufo badan oo khasabay arrintaas.
Sanatar Ilyaas oo qaba in ay shacabku u dooraan Aqalka Sare Ajendaha Kulankiisa Koowaad
War-bixin – Kalfadhigii 43aad ee golaha wakiillada Puntland oo xirmay, maxaa u qabsoomay golaha?